Dowladda Soomaaliya oo ka hortimid go’aan caalami ah oo ka dhan ahaa Ethiopia | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Dowladda Soomaaliya oo ka hortimid go’aan caalami ah oo ka dhan ahaa...
Dowladda Soomaaliya oo ka hortimid go’aan caalami ah oo ka dhan ahaa Ethiopia
Geneva (Dalkaan.com) – Golaha Xuququda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa cod uu qaaday ku anisixiyey abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameeya tacaddiyada xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya.
Codaynta ayaa dhacday kadib shir shalay looga hadlay xaaladda xuquuqda aadanaha Itoobiya, taasi oo saraakiisha Qaramada Midobay ay ka digeen in dagaalka Itoobiya uu noqon karo mid baaha oo saameeya gobolka.
Codaynta shalay la qaaday ayaa 21 waddan oo ka mid ah waddamada ku jira Golaha Xuquuda Aadanaha ee Qaramada Midobya waxay ku codeeyeen inay ansixiyaan qaraarkaasi, waxaana kasoo horjeestay 15 waddan, halka 11 ay ka aamuseen.
Waddamada ansixiyey waxa ka mid ah kuwa Yurub oo ay ku jiraan Biritan iyo Jarmalka, halka kuwa kasoo horjeestay ay ku jraan Soomaaliya iyo Eritrea.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa saaxiib la ah ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Farmaajo wuxuu horey u taageeray dagaalka uu Abiy ku qaaday Tigray-ga, halka Afwerki uu ciidan u diran gobolkaas.
In dowladda federaalka diido in la baari tacaddiyo bani’adaamanimo waa ceeb kale oo usoo hoyatay Soomaaliya.
Ka sokow Soomaaliya iyo Eritrea, dhammaan waddamada Afrika ee ku jira golahan ayaa iskugu jiray kuwo diiday iyo kuwo ka aamusay. Waddamada ka aamusay waxaa ka mid ah Senegal, Liibiya, Malawi yo Sudan.
Guddigan ayaa ka koobnaan doona saddex qof, waxayna la socon doonaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Itooobiya muddo hal sano ah.
Dawladda Itoobiya waxay kasoo horjeesatay shirka shalay iyo dhismaha guddiga, waxayna sheegtay in shrika ay afduubeen dhinacyo leh dano siyaasadeed, sida hadalka loo dhigay.
Wasaaradda A/Dibedda Mareykanka oo war kasoo saartay shirka Muqdisho iyo doorashada...
Muqdisho (Caasimada Online) – Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu taageeray shirkii uu iclaamiyey ra’iisul wasaare Rooble, sidoo...
Carlo Ancelotti ” Karim Benzema Waxa uu lamid yahay Ronaldo, iyo...
XAALADDA AMNIGA MUQDISHO & KHUDBADII TALIYE XIJAAR.
AF-HAYEENKA BOOLISKA SIDIIQ “LACAGTII KENYA IYO NINKII RUUSHKA AHAA OO LAGU...
ICTIRAAFKII SOMALILAND OO WAJI CUSUB YEESHAY & DOOD KULUL
WAXA SOO SOCDA IYO WABIGA YAA WAYN? (HORUDHAC.)
Pep Guardiola oo jabiyay rikoorka Jurgen Klopp uu ka heestay Horyaalka...
Barkhad Jaamac Batuun: Waxaa billaabmeysa fool xumada Somaliland haddii…
Al-Shabaab iyo Daacish oo ku dagaalamay gobolka Bari